Nepal Samaya | एक सातामा १६५.२८ अंकले बढ्यो नेप्से
एक सातामा १६५.२८ अंकले बढ्यो नेप्से
नेपाल समय | काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८
शुक्रबार, पुष ३०, २०७८, काठमाडौं
काठमाडौं– पछिल्लो एक सातामा सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक १६५.२८ अंकले वृद्धि भएको छ।
गत साताको विहिबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक ४३.२९ अंकले बढेर २ हजार ६९२.४७ विन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको पाँचै दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक चार दिन बजार उकालो लाग्दा एक दिने भने गिरावट आएको छ। यो साताको पाँच दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक १६५.२८ अंकले बढेर भएर २ हजार ८५७.७५ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ।
अघिल्लो साता १६७.९७ अंकले बढेको नेप्से परिसुचक यो साता १६५.२८ अंकले बढेको हो। तर, गत साताको भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक २ अंकले गिरावट आएको छ। पछिल्लो चार महिना देखि निरन्तर रुपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक पछिल्लो दुई सातादेखि निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ।
मंगलबार पनि नेप्से परिसूचक ४९.१९ अंकले बढेर २ हजार ८३४.१३ विन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै, यस दिन ठूला कम्पनी मूल्य मापक सेन्सेटिभ इण्डेक्स ६.३४ अंक बढेको थियो भने फ्लोट इण्डेक्स ३.६२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स पनि २.२४ अंक बढेको थियो मंगलबार कारोबारमा आएका २३२ कम्पनीको १ करोड १९ लाख ७० हजार कित्ता शेयर ६ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
तर, बुधबार भने सातामा तीन दिनको कारोबारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्सेमा ३०.५१ अंक घटेर २८०.६२ विन्दुमा झरेको थियो । त्यस्तै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स ७.०४ अंक, फ्लोट इण्डेक्स १.८६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.१७ अंक घटेको थियो । बुधबार कारोबारमा आएका २२९ कम्पनीको १ करोड ६१ लाख ४७ हजार कित्ता शेयर ८ अर्ब ३ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से घटेपनि बुधबारको कारोबार रकम भने ८ अर्ब माथि नाघेको थियो ।
पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पतिमा पनि वृद्धि भएको छ । गतसाता २ खर्ब ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पति यो साता २ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पूँजीकरण कुल ३८ खर्ब ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो साता २ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सम्पति बढेर ४० खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
प्रकाशित: January 14, 2022 | 16:27:53 काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८
काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८
लमजुङमा अलैंची उत्पादन ८५ प्रतिशतले घट्यो
लमजुङमा यसवर्ष अलैंची उत्पादनमा कमी आएको छ। आवश्यकता अनुसार समयमा पानी नपर्नु, मौसम अनुकूल नहुनु, बोटमा कीरा लाग्नु र बोट सुक्नुलगायतका कारणले यो वर्ष अलैंची उत्पादनमा कमी आएको हो।
नेप्सेमा ६९ अंकको उछाल, परिसूचक २९ सय नाघ्यो
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाउँदा बजार परिसूचक नेप्से २९ सय नाघेको छ।
बतास समूहले जिम्मा लिएको पशुपति धर्मशालामा 'अनुमति नलिएरै काम'
बतास समूहले जिम्मा लिएको पशुपति धर्मशालामा अमनुमति नलिएर काम भइरहेको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बनाइएको धर्मशालामा अनुमति नलिइकनै काम गरेको पाइएको बताएका छन्।
सिभिल बैंक खाता 'खल्ती'मा लिंक गर्दा रु. १०० बोनस र स्मार्टफोन उपहार
अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ’खल्ती’ले सिभिल बैंक खाता ‘’खल्ती’’सँग लिंक गर्ने प्रयोगकर्ताहरुका लागि रु. १०० बोनस अफर ल्याएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको तथ्य बाहिर ल्याएको हो।
सवा ३ करोडको फक्सवागन ट्वारेग–आर नेपाली बजारमा
नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक वितरक पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालिले कम्पनीको टप रेन्जको फ्ल्यागसिप मोडल ट्वारेग–आर नेपाल भित्र्याएको छ।